SIDEE LO MAREE YAA JECEYL 40 SANO JIR KUKU GALEY | Wararka Dalka Iyo Dibada
SIDEE LO MAREE YAA JECEYL 40 SANO JIR KUKU GALEY
Jul 23, 2018 - jawaab
Dalka Hindiya waxaa dood xooggan dhaliyay filim cusub oo ka hadlaya jacaylka dadka da’ dhexaad ah.
Filim dhawaan lasoo saaray oo ay soo bandhigtay shirkadda Bollywood ayaa soo jiitay dareenka dadka shineemooyinka gala ee Hindiya, waxaana jirta in lagu kala aragti qeybsanyahay.
Filimkan oo lagu magacaabo Angrezi Mein Kehte Hain oo micnaheedu yahay (Afka Ingiriiska waxaa lagu dhahaa Waan Ku Jeclahay) ayaa waxa uu ku saabsanyahay lammaane wada jooga oo maraya da’ dhexaadka, waxaana jirta in sayga uu guurka ku qanacsanyahay, balse xaas ay saygeeda ka rabto wax badan, sida jacayl iyo farxad galin.
Atooraha oo ku jilaya magaca Yashwant Batra ayaa ka shaqeeya wakaaladda boostada, halka atariishada oo ku jilaysa magaca Kiran ay tahay guri joog, balse kuma faraxsana guurkooda mudada 25-ta sano soo jiray.
Waxa ay ku noolyihiin magaalada xiimaysa ee ku taala webiga Ganges ee waqooyiga Hindiya, xaaskuna waxa markasta ka hadlaysaa waxa maankeeda ku taagan oo ma ahan mid qarsata waxa caloosheeda ku jira.
Isaga waxa uu qabaa in mar haddiiba uu biilkeeda siinayo, gurina usoo hoydo in intaasi ay ku filantahay xaaska, balse Kiran waxa ay rabtaa waxoogaa ammaan ah, muujin jacayl iyo in waqti lala qaato.
Waa xaajo ugu ku ah aflaamta Bollywood-ka oo inta badan jacaylka lagu matalo dad dhalinyaro ah.
Dadka qaarkood ayaa dhaleeceeyay filimkan, halka kuwa kale ay sheegeen in uu ka turjumayo dhibaato bulshada ka dhex jirta oo u baahan in xal laga gaaro.
Mid ka mid ah dadkii aragtiyada ka dhiibtay filimka ayaa sheegay in dadka intooda badan ay aragti qaldan ka qabaan jacaylka, iyaga oo u maleeya in uu dhex maro wiil iyo gabar oo kaliya.
Mishra waxa uu sheegay in xiriirka ka dhaxeeya isaga iyo xaaskiisa uu ahaan lahaa mid lagu caajiso haddii uusan jacayl meesha ku jirin.
“Waxaa jira wax aan qoysaskeena ka dhaxalnay, qof kastaba xushmad ayuu u hayaa kan kale, balse ma jiro qof jacayl u muujin kara lammaanihiisa” ayuu yiri Mishra.
Qeybaha dambe ee filimka Mishra waxa uu garoowsanayaa gefafka uu galay, iyo in ay tahay in uu xaaskiisa jacayl u muujiyo. waxa uu sheegay in xaaskiisa ay qurux badantahay, islamarkaasna uu jecelyahay cuntada ay kariso.
Waxaa dalka Hindiya dhaqan hirgalay ka ah in xaaska kaalinteeda ay tahay uun cunto karin iyo qabashada shaqooyinka guriga, waxkastana ay markaas iska noqonayaan wax caadi ah.
Dad badan ayaa qaba in ay tahay wax aan haboonayn in bulshada dhexdeeda lagu muujisto jacaylka, kana mid ahayn dhaqanka Hindida.
Waxaa jirta in filimka uu qirayo in jiilka hadda jooga iyo kii hore ay aad u kala duwanyihiin, tusaale ah da’yarta hadda joogta waxa ay ku qanacsanyihiin in ay muujistaan jacaylkooda, halka waalidkood markii ay dhalinyarada ahaayeen ay ceeb ahayd ama laga xishoon jiray in jacaylka la muujisto.